တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော (၂၀၁၁ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော (၂၀၁၁ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်)
၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၀၉-၂၂)
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော (Silenced; ဟန်းဂု: 도가니; RR: Dogani; MR: Togani လုံ့လ (The Crucible) ဟုလည်း အမည်တွင်) သည် ၂၀၁၁ တောင်ကိုရီးယား ပြဇာတ် ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး ဂုန်ဂျီယောင်း ရေးသားသည့် လုံ့လဟူသော ဝတ္ထုပေါ် အခြေခံထားကာ၊ ဂုန်ယူးနှင့် ဂျန်းယူမိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဂွမ်ဂျူး အင်ဟွာ နားမကြားကျောင်း၌ ဖြစ်ပွား‌ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံထားပြီး၊ နားမကြား ကျောင်းသားကလေးများသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းမှ စ၍ ငါးနှစ်တိုင်တိုင် ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ထပ်ပြန် တလဲလဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစော်ကားခံရသော သားကောင်များ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများနှင့် တရားရုံးခွင်တင် စစ်ဆေးမှုများက ဆရာများကို ပြစ်ဒဏ် မဆိုစလောက်သာ ချသည်ကို သရုပ်ဖော်ထားသော ထိုရုပ်ရှင်သည် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ တွင် ဖြန့်ချိလိုက်သောအခါဝယ် ပြည်သူများ ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲသွားပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ဖြစ်စဉ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများ ပြန်လည် ပြုလုပ်ခဲ့ရလေသည်။ ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်မိသော ကိုရီးယား ပြည်သူ လေးသန်းက တရားဥပဒေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို တောင်းဆိုကြရာ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားလွှတ်တော်ထိ ရောက်သွားပြီး၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ တွင် ဒိုဂနိ မူကြမ်းဟု ခေါ်သော ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
၆ နိုင်ငံတကာသို့ ပြသခြင်း
ကန်အင်ဟို (ဂုန်ယူး)သည် မြောက်ဂျိုလာခရိုင်၏ ရုပ်ရှင်ထဲက မြို့တွင် နားမကြားကလေးများအတွက် ကျောင်းတကျောင်းဖြစ်သော ကုသိုလ်ဖြစ် ကျောင်းတွင် အသစ် ခန့်အပ်ခံရသော အနုပညာသင် ဆရာဖြစ်သည်။ သူ့တွင် မှောင်မိုက်သော အတိတ် ရှိခဲ့သည်၊ သူ့ဇနီးသည် လွန်ခဲ့သော တနှစ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပြီး၊ နေမကောင်းသော သမီးမှာ အဘွားက စောင့်ရှောက်ထားရသည်။ သူ့‌ကျောင်းသားသစ်များကို သင်ကြားရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော်လည်း၊ ကလေးများသည် တတ်နိုင်သမျှ မတိုက်မိအောင် သူ့ကို အဖက်မလုပ် ရှောင်ဖယ်နေကြသည်။ သို့သော်လည်း အင်ဟို လက်မလျှော့ဘဲ၊ ကလေးများကို ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြသသည်။ ကလေးများနှင့် ရင်းနှီးလာသောအခါမှ အင်ဟိုသည် ရုပ်ဆိုးအကျည်း၍ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းသော အမှန်တရား၊ ကလေးများ သည်းညည်းခံနေရသည့် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ရင်ဆိုင်တွေ့သည်။ ၎င်းမှာ ကလေးများသည် သူတို့ ဆရာများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားသည်ကို ခံနေရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ရန်နှင့် ကျောင်းတွင် ကျူးလွန်နေသော ရာဇဝတ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ဆိုယူဂျင်း (ဂျောင်ယူမီ)နှင့် ပူးပေါင်းသည်။ သို့သော် မကြာမီ သူတို့ သဘောပေါက်သွားသည်မှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာများကသာမက ရဲဘက်၊ ရှေ့နေများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ ဘုရားကျောင်းများကပါ အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ကို သုံးသည်သာမက အစွပ်စွဲခံရသူတို့သည် ပြစ်ဒဏ် သက်သာစေရန် လိမ်လည်ခြင်း၊ လာဘ်ထိုးခြင်းများလည်း မဆိုင်းမတွ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Gong Yoo - ကန်အင်ဟို
ဂျောင်ယူမီ - ဆိုယူဂျင်း
ကင်ဟွန်းဆူ - ယွန်းဒူ
ဂျောင်အင်ဆော - ယူရီ
ဘဲ့ဆောင်ဟွမ် - မင်ဆူ
ကင်ဂျီယောင်း - အင်ဟိုမိခင်
ဂျန်ဂွမ် - ကျောင်းအုပ်ကြီး အမွှာညီအစ်ကို
အင်မြောဆွန် - ယောင်းဟွန်း
ကင်ဂျူရောင်း - ယွန်းဂျာအဲ
အုံဟျိုဆု - ရဲအရာရှိ ဂျန်
ဂျွန်ကွတ်ဟွမ် - ရှေ့နေ ဟွမ်
ချွိုင်ဂျင်ဟို - စုံစမ်းရေးမှူး
ကွန်ယူဂျင်း - တရားသူကြီး
ပတ်ဟဲဂျင်း - ကျောင်းအုပ်ကြီးဇနီး
ကင်ဂျီယောင်း - ဆိုးယီ
အွမ်ဂျီဆွန် - ယောင်းဆူ
လီဆန်ဟီး - ဝပ်ရှော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်
နမ်မြောင်ရူး - ပါမောက္ခ ကင်ဂျောင်ဝူ
ဂျန်ဆိုယွန် - တရားရုံးလက်ဟန်သင်္ကေတစကားပြန်
ဟုန်ဆုယွန် - ကျောင်းစောင့်
ရုပ်ရှင်သည် လူထုကြား ယမ်းပုံမီးကျသကဲ့သို့ လှုပ်ရှားသွားစေပြီး၊ လျော့ရဲသော ရုံးတော်၏ စည်းမျဉ်းများကို မေးခွန်းထုတ်လာကာ၊ ရဲများကို အမှု ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုသည့်အပြင် လွှတ်တော်၌လည်း ဆွံ့အနားမကြား မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးသော ဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းနိုင်စေခဲ့သည်။ ပညာရေးအာဏာပိုင်များက ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ရန် အကြံပြုခံသူ ဂွမ်ဂျူအင်ဟွာ ကျောင်းမှ ကျောင်းဆရာ ခြောက်ဦးအနက် လေးဦးကို ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ပြစ်ဒဏ် ကျခံနေရာမှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ပြန်လည် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ နှစ်ဦးကသာလျှင် ကလေး ရှစ်ယောက်ကို ထပ်ဖန်တလဲလဲ ဗလက္ကာယ ပြုကျင့်မှု ပေါ်ပေါက်ပြီး တနှစ်မပြည့်သော ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၆၄ တွင် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားစဉ် ကလေးနှစ်ဦး သေဆုံးပြီး၊ မိမိသည် ဒုကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ထိုးကြိတ်ခံရပြီး အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်ဟု ၇၁ နှစ်ရှိ ကျောင်းဆရာဟောင်း ကင်ယုန်အီက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီး၊ ဝေဖန်မှုများ ခံရပြီး နှစ်လကြာသော်၊ ဂွမ်ဂျူမြို့သည် ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာတွင် ကျောင်းကို ပိတ်သိမ်းသည်။ ၂၀၁၂ ဇူလိုင်တွင်၊ ဂွမ်ဂျူခရိုင်ရုံးက ၆၃ နှစ်ရှိ ဂွမ်ဂျူအင်ဟွာကျောင်း၏ ယခင် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူကို ၁၈ နှစ်အရွယ် ကျောင်းနေဆဲသူကို ၂၀၀၅ ဧပြီတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်သည်။ ကျူးလွန်စဉ်တွင် မျက်မြင်သက်သေ ဖြစ်ခဲ့သူ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျောင်းနေသူကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအတွက်လည်း စွဲချက် တင်ခံရသည်။ (ထိုကျောင်းသူသည် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် မကြာခဏ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်) မျိုးရိုးနာမည် ကင်ဟုသာ ဖော်ပြသူ ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူကို ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း ၁၀ နှစ်ကြာ လျှပ်စစ်ခြေကျင်း ခတ်ရန် အမိန့်ချသည်။
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သောရုပ်ရှင်ကား လူအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေအနေမှန်ကို သွက်လက်စွာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည့်အဖြစ်မျိုး ထိုနှစ်များအတွင်း မည်သည့်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ကားမျှ မရှိဖူးချေ။ထိုရုပ်ရှင်သည် ကိုရီးယားတွင် သုံးပတ်ဆက်တိုက် နံပါတ်တစ် ချိတ်ပြီး၊ ဖြန့်ချိပြီး ပထမပတ်အတွင်း ဝမ် ၇.၈ ဘီလီယံ မြတ်စွန်းကာ၊ ဆယ်ပတ်ကြာ ပြသပြီးနောက် အသားတင် စုစုပေါင်း ဝမ် ၃၅ ဘီလီယံ မြတ်စွန်းလေသည်။
ရုပ်ရှင်၏ အရောင်းရဆုံး မူရင်းဝတ္ထုလည်း ဖြစ်၊ ရာဇဝတ်မှုများကို စုစည်းဖော်ပြထားပြီး၊ ရုပ်ရှင်တွင်ပါသော အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဂုန်ဂျီယောင်း၏ ဝတ္ထုသည် နှစ်နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဘက်ဆဲလား စာရင်းတွင် ပြန်ပါလာသည်။ အာဏာရ ကွန်ဆာဗေးတစ် နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သော ဂရင်းအမျိုးသာပါတီ (GNP) ကလည်း ဂုန်ဂျီယောင်းကို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အတွက် ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ၊ လူထု၏ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရသည်။ 
ထိုရုပ်ရှင်သည် အီတလီ၌ ကျင်းပသော ၂၀၁၂ အူဒင်းအရှေ့ဖျားရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပရိသတ်ဆုကို ရရှိသည်။
ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သော ထိခိုက်ပွတ်တိုက်မှု စကားစစ်ထိုးပွဲများသည် ဆမ်ဆောင်စီးပွားရေးသုတေသနကောလိပ် (SERI) မှ နှစ်စဉ် ပြုလုပ်မြဲ ဖြစ်သော စစ်တမ်း တနှစ်တာအတွင်း ထိပ်တန်း ဖြစ်ရပ် ၁၀ ခုကို ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၇ တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သောအခါ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဈေးကွက်စစ်တမ်း စာရင်းနှင့် စားသုံးသူ ၈၀၀၀ နီးပါးအပေါ် မူတည်၍ အက်စအီးအာအိုင်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင် ကိုရီးယား ထိပ်တန်း ပေါက် ၁၀ ခုတွင် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားသည် ထိပ်တန်း ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့သည်။ 
၂၀၁၁ 32nd Blue Dragon Film Awards အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် The Crucible ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ Hwang Dong-hyuk ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် Gong Yoo ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် Jung Yu-mi ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ Jang Gwang ဆန်ကာတင်
Best Screenplay Hwang Dong-hyuk ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး တေးဂီတ Mowg ဆုရရှိ
Popular Star Award Gong Yoo ဆုရရှိ
2012 48th Paeksang Arts Awards အကောင်းဆုံး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် Gong Yoo ဆန်ကာတင်
49th Grand Bell Awards အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် The Crucible ဆန်ကာတင်
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ Kim Hyun-soo ဆန်ကာတင်
KOFRA Film Awards အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် The Crucible ဆုရရှိ
Udine Far East Film Festival Audience Award Hwang Dong-hyuk ဆုရရှိ
Black Dragon Audience Award Hwang Dong-hyuk ဆုရရှိ
ရုပ်ရှင်၏ နိုင်ငံတကာအတွက် ခေါင်းစဉ်မှာ "Silenced" ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၄ တွင် ရုပ်ရှင်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့, စန်ဂျို့မြို့၊ ဟန့်တင်တန်ကမ်းခြေ၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့၊ အတ္တလန္တာမြို့၊ ဒါးလတ်စ်မြို့၊ရှီကာဂိုမြို့၊ ဆီးတဲမြို့၊ ပို့တလန်းမြို့၊ လပ်ဗီးဂပ်စ်မြို့၊ တိုရွန်တိုမြို့နှင့် ဗန်ကူးဗားမြို့တို့ရှိ ရွေးချယ်ထားသော ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသသည်။ ဝေါစထရိဂျာနယ်၊ စီးပွားရေးဂျာနယ်နှင့် နယူးယောက်တိုင်းတို့ကလည်း အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
↑ Dogani (Crucible) Box Office Mojo. Retrieved 2012-04-25
↑ Fueled by need for fresh material, best-sellers become box office hits JoongAng Daily.9September 2011. Retrieved 2012-04-25
↑ "'The Crucible' Brings Demons of Child Molestation Case Back to Life" Chosun Ilbo. 28 September 2011. Retrieved 2011-10-15
↑ Film examines child abuse case Korea Times. 24 August 2011. Retrieved 2012-04-25
↑ Real life case of child abuse explored in The Crucible The Hankyoreh.9September 2011. Retrieved 2011-10-15
↑ The Crucible (2011) The Chosun Ilbo. 23 September 2011. Retrieved 2012-04-25
↑ 2011.9.23 NOW PLAYING JoongAng Daily. 23 September 2011. Retrieved 2012-04-25
↑ Now showing Korea Times. 22 September 2011. Retrieved 2012-04-25
↑ "Sexual abuse of disabled, vulnerable, or Dead people on the rise" Yonhap News. 29 September 2011. Retrieved 2011-10-15
↑ "Deaf School Teachers Face Firing Over Sex Abuse Scandal" Chosun Ilbo.4October 2011. Retrieved 2011-10-15
↑ "Box-office hit sheds new light on sex crimes against disabled students" Yonhap News. 30 September 2011. Retrieved 2011-10-15
↑ "광주 인화학교 50년전 학생 암매장 폭로(종합)" Yonhap News. 17 October 2011. Retrieved 2011-11-08 (ကိုရီးယား)
↑ "경찰, 47년 전 인화학교 학생 암매장 의혹 조사" Yonhap News. 18 October 2011. Retrieved 2011-11-08(ကိုရီးယား)
↑ "'Dogani' school to be shut down" Korea Times. 31 October 2011. Retrieved 2012-03-31
↑ Gwangju school sex offender gets 12 years in prison။ Korea Times (5 July 2012)။ 2011-11-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gwangju school sex offender gets 12 yrs in prison။ Yonhap News (5 July 2012)။ 2011-11-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "South Korea Box Office: November 25–27, 2011" Box Office Mojo. Retrieved 2012-04-19
↑ Victims at Deaf School Meet Film Stars During Seoul Tour Chosun Ilbo.6January 2012. Retrieved 2012-04-25
↑ "GNP calls for investigation into 'The Crucible' author" The Hankyoreh. 29 October 2011. Retrieved 2011-11-08
↑2films won Audience Award at Far East Film Festival Korea Times. 30 April 2012. Retrieved 2012-04-30
↑ Kwon၊ Jungyun (15 December 2011)။ A look back at the year's breakout films။ Korea.net။ 2012-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Woo, Jaeyeon "Unsettling ‘Dogani’ Revisits School Horror" The Wall Street Journal. 27 September 2011. Retrieved 2011-11-08
↑ "Silent for too long" The Economist. 11 October 2011. Retrieved 2011-11-08
↑ Choe, Sang-Hun "Film Underscores Koreans' Growing Anger Over Sex Crimes" The New York Times. 17 October 2011. Retrieved 2011-11-08
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (ကိုရီးယား)
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (အင်္ဂလိပ်)
Silenced at the Internet Movie Database
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော_(၂၀၁၁_တောင်ကိုရီးယား_ရုပ်ရှင်)&oldid=387924" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၃:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။